किन एकाएक अाकाशियो प्याजको मूल्य ? – Halkaro
किन एकाएक अाकाशियो प्याजको मूल्य ?
प्रकाशित मिति : २०७४, १२ मंसिर मंगलवार
काठमाडौं । भारत सरकारको निर्यातसम्बन्धी नयाँ नीतिका कारण नेपाली बजारमा प्याजको मूल्य आकासिएको छ । प्याजको निर्यातदर घटाउन भारतले न्यूनतम निर्यात मूल्य (एमईपी) प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याएपछि त्यसको असर नेपाली बजारमा परेको अाजको अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा समाचार छ ।
← दोस्रो चरणको निर्वाचनका लागि सुरक्षा चुनौतीः पहाडमा विप्लव तरार्इमा खुला सिमाना र सशस्त्र समूह
प्रचण्डको चुनावी अभियानः मर्निङ वाकसँगै काँग्रेस कार्याकर्ता रिझाउँदै →